Nepalgunj, Bheri, Nepal Radio Xpress स्पेनिस घरेलु फुटबल प्रतियोगिता कोपा देल रेको फाईनलमा आज राति एकै शहरका प्रतिद्धन्द्धी रियाल मड्रिड र एथ्लेटिको मड्रिड आमुने–सामुने हुँदैछन् । नेपाली समय अनुसार राति साव एक बजे सुरु हुने खेल रियाल मड्रिडको मैदान सेन्टियागो बर्नाबेउमा खेलिनेछ । हालसम्म रियाल मड्रिडले कोपा देल रे अर्थात किंग्स कपको उपाधि १८ पटक जितेको छ भने एथ्लेटिको मड्रिडले यो उपाधि ९ पटक चुमेको छ । जारी सिजनको सुरुवातमा स्पेनिस सुपर कपको उपाधि जितेको रियाल मड्रिडले स्पेनिस फुटबल लिग ला लिगा बार्सिलोनासँग गुमाईसकेको छ भने च्याम्पियन्स लिगमा उ सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ । तसर्थ कोपा देल रे उपाधि रियाल मड्रिडका लागि सान्त्वना जित हुनेछ । अर्कातर्पm पछिल्लो १४ वर्षमा रियाल मड्रिडलाई कुनै खेलमा हराउन नसकेको एथ्लेटिको मड्रिडका लागि यो खेल निकै चुनौतिपूर्ण रहनेछ । एकै शहर मड्रिडका प्रतिद्धन्द्धी रियाल मड्रिड र एथ्लेटिको मड्रिडबीचको खेललाई ‘मड्रिड डर्बी’ पनि भनिन्छ । 23 hours ago
Radio Xpress इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत गएरातिको खेलमा जीत हात पारेको किंग्स इलेभेन पञ्जावले चौंथो स्थानमा उक्लिने सम्भावना जोगाउनुका साथै प्ले–अफ खेल्ने झिनो सम्भावनालाई पनि जीवितै राखेको छ । पञ्वाले दिल्ली डेयरडेभिल्सलाई ७ रनले हराएको हो । खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको पञ्जावले ४ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ७१ रन जोड्यो । पञ्जावका सन मार्सले सर्वाधिक ४५ रन बनाए भने दिल्लीका आशिष नेहेराले २ विकेट लिए । जवाफमा १ सय ७२ रनको लक्ष्य पछ्याउको दिल्लीले ७ विकेटको नोक्सानीमा मात्र १ सय ६४ रन जोड्यो । दिल्लीका बेन रोहर्रले सर्वाधिक ४९ रन बनाए भने पञ्जावका सन्दिप शर्माले ३ विकेट हात पारे । जारी प्रतियोगितामा १२ औं हार बेहोरेको दिल्ली यसअघि नै प्रतियोगितामा प्ले–अफ खेल्नबाट बन्चित भईसकेको थियो । १५ खेलबाट १४ अंक जोडेको पञ्जाव अंक ताकिलाको छैठौं स्थानमा छ भने समान खेलबाट ६ अंक जोडेको दिल्ली आठौं स्थानमा छ । आईपीएलमा आज सनराईजर्स हैदरावादले राजस्थान रोयल्सको सामना गर्ने । खेल नेपाली समय अनुसार साँझ साव आठ बजे सुरु हुनेछ । 23 hours ago
Radio Xpress बंगालको खाडीबाट उठेको महासेन तूफानका कारण बंगलादेश, बर्मा र उत्तर पूर्वी भारतका ८२ लाख व्यक्तिको जीवन खतरामा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले भने समयमै सावधानी अप���ाउन सम्बन्धित देशहरुलाई सचेत तुल्याएको छ । बंगलादेशको दक्षिणी तटमा भने यही महासेन आँधीमा परी १२ जनाको मृत्यु भएको छ । आँधीकै कारण लाखौं मानिस आफ्नो थातथलो छाडेर पलायन भएका छन् । बंगलादेशका ९ लाख जनतालाई तटीय क्षेत्रबाट हटाएर ३ हजारभन्दा बढी शिविरमा राखिएको बंगलादेश सरकारले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बंगलादेशका अधिकांश कलेज र विद्यालयलाई आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । आँधी हालसम्म पनि आइरहेको छ । भीषण बर्षा हुने क्रम रोकिएको छैन । हावाको वेग प्रतिघण्टा सय किलोमिटर रहेको मौसमविदहरुले जनाएका छन् । आँधीबाट बंगलादेश र बर्माको सीमा बढी प्रभावित बनेको छ । बंगलादेशमा पाँच बर्षअघि नर्गिस नामक तूफान आउँदा पनि एक लाख मानिस मारिएका थिए । 23 hours ago
Radio Xpress न्यूज ट्वान्टी फोर टेलिभिजनका अध्यक्ष अनिल जोशीले तलब माग्ने पत्रकारहरुलाई धम्की दिँदै संस्था छाडेर जान बाध्य पारेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार÷कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउनका लागि व्यवस्थापनसमक्ष दबाब दिइरहेका बेला जोशीले अझै एक वर्षसम्म तलव नदिने र तलव मागेर दबाब दिने पत्रकारलाई जे पनि गर्ने धम्की दिएका महासंघले जनाएको छ । तलव माग्ने पत्रकारलाई छाडेर जान दबाब दिँदै धम्कीसमेत दिएपछि प्रमोद न्यौपाने, प्रभात देवकोटा, अनुप आचार्यलगायतका श्रमजीवी पत्रकारहरुले राजीनामा दिएका छन् । त्यहाँ कार्यरत अन्य पत्रकारलाई समेत त्रसित बनाउँदै काम गर्न बन्देल लगाउँदै मानसिक यातना दिएको महासंघले जनाएको छ । गैरकानुनी र श्रमजीवी पत्रकारविरोधी हर्कत तुरुन्त बन्द गर्न एवं संविधान र ऐन–नियमबमोजिम पत्रकारहरुलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्ने वातावरण तत्काल निर्माण गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई चेतावनी दिँदै महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हित र अधिकार स्थापना गराउन जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । 23 hours ago
Radio Xpress राजधानीको ठमेलमा बिहीबार राति भीषण आगलागी भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलको काठमाडौं गेष्ट हाउस नजिकैबाट सल्किएको आगोका कारण दुई घर पूर्णरुपमा जलेका छ । उक्त घरमा राखिएका १० वटा पसलमा क्षति पुगेको सोह्रखुट्टेका प्रहरी निरीक्षक कवित कटुवालले जानकारी दिए । अजय साहीको घरमा रहेको रेष्टुरेन्टबाट आगलागी सुरु भएको थियो । आगलागीबाट अन्य ४ वटा घरमा पनि क्षति पुगेको छ । आगो निभाउन काठमाडौंसहित ललितपुर र भक्तपुरका दमकम घटनास्थल पुगेका थिए । बिहीबार राति १० सल्किएको आगो बिहान ३ बजे नियन्त्रणमा आएको थियो । सिलिन्डर पड्किएपछि आगो फैलिएको थियो । सिलिण्डर पड्किदा तीन जना घाइते भएका छन् । आगलागीबाट दुई करोड बढीको क्षति भएको अनुमान गरिए पनि यकिन विवरण आउँन बाँकी छ । आगोबाट ठमेलस्थित पिलग्रिम बुक हाउसको किताबहरु पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् । 23 hours ago
Radio Xpress अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचारबारे चासो देखाएको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको गुनासो आइरहेका बेला प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बरालसहितको टोलीले स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारका अखडाहरुबारे विवरण माग गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव, वि���ागीय प्रमुख, उपत्यकाका नगरपालिका प्रमुखसँग शुक्रबार आयोगको कार्यालय टंगालमा भएको छलफलमा स्थानीयस्तरका सबै समस्या मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी क्रियाशील भई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनताको लागि सेवा प्रदान गर्न के-के कुराहरुमा अप्ठ्यारो पर्न गएको देखिन्छ भन्नेबारे समन्वय र समयसीमा सहित अनुगमनको खाका तयार गरी सचिवको नेतृत्वमा समाधानको प्रयास गर्न पनि निर्देशन दिइएको अख्तियारले बताएको छ । 23 hours ago
Radio Xpress आदिवासी जनजाती महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई आज पदभार हस्तान्तरण गरिको छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीले नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालललाई पदभार हस्तान्तरण गरेका हुन् । गत वैशाख ३१ गते चितवनको सौराहामा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले नगेन्द्र कुमालको अध्यक्षतामा नयाँं कार्यसमिति चयन गरेको थियो । महासंघको उपाध्यक्षमा तराईमा राम अवतार मण्डल, हिमालमा डण्डु शेर्पा, पहाडमा सूर्यबहादुर भुजेल, भित्री तराईमा तपिया दराई, महिलामा रोश्नी मेचेलाई चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी महासचिवमा पेम्बा गुरुङ भोटे र कोषाध्यक्षमा जगतबहादुर बराम चयन भएका थिए । सचिवमा, हिमालबाट गणेशलाल थकाली, पहाडबाट यमबहादुर चेपाङ, तराईबाट ध्यानी उराव, भित्री तराईबाट चिनिमायाँं माझी र महिलामा यशोधा चौधरी चयन भएका थिए । महाधिवेशनमा कांग्रेस र एमाले निकटका जनजातिबीचको गठबन्धन विजयी भएको थियो । 23 hours ago
Radio Xpress एकीकृत माओवादीका नेता वर्षमान पुनले भातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसीएल) लाई पुनः सक्रिय बनाउने बताउनुभएको भएको छ । वाइसीएल नेवाः राज्य समितिले काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजना गरेको मोटरसाइकल र्यालीको उद्घाटन गर्दै पुनले वाइसीएललाई सक्रिय पारिने बताउनुभयो । विगतमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा बाधा नपुगोस् भन्नका लागि वाइसीएल निस्कृय पारिएकाले बदलिएको परिस्थितिमा वाइसीएललाई सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको एमाओवादी युवा इन्चार्ज पुनको भनाइ छ । काँग्रेस र एमालेले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि अर्धसैन्य दस्ता बनाएको भन्दै चर्को विरोध गरेपछि माओवादीले तीन वर्षअघि वाइसीएलको ब्यारेकीय संरचना हटाएको थियो । र्यालीको नेतृत्व गरेका वाइसीएल नेवाः राज्य समिति सयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशीखा’ले लामो समयसम्म निस्कृय रहेको संगठनलाई गति प्रदान गरिने बताउनुभयो । नेवाः राज्य समितिको एकताको पहिलो अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा वाइसीएलले मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो । सम्मेलनको शनिबार एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजधानीको वसन्तपुरमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । खुलामञ्चबाट सुरु भएको मोटर साइकल र्याली, जमल, दरबारमार्ग, पुतली सडक, प्रदर्शनीमार्ग, भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर हुँदै नयाँबानेश्वर पुगी समापन भएको थियो । 23 hours ago
Radio Xpress नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत प्रयोग भएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीबीचको एकता महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै एमाले सचिव पोखरेलले लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको रिट दर्ता गर्न कार्कीलाई सोध्नु पर्ने व्यवस्था गरेर अदालतले आफूलाई कमजोर देखाएको टिप्प्पणी गर्नुभयो । नेपालको अदालत पञ्चायतकालमा पनि यति धेरै कमजोर भएको नेदेखिएको भन्दै उहाँले लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अराजकता बढेको बताउनुभयो । एकता महाधिबेशनमा शुभकामना दिँदै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको राजिनामा माग्नेहरुले चुनाव हुन नदिन षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । पौडेललले संविधान सभाको चुनावका लागि यही सरकारलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको विरोधमा रहेकाहरुसँग सहमतिका लागि आफूहरु निक्कै लचक भएको बताउनुभयो । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले संविधान सभा चुनावमा जानु अघि नै दलहरुबीच केही विषयमा सहमति गरिनु पर्ने बताउनुभयो । यो एकीकरणले दलहरुबीच सहमति गर्न हौसला मिलेको महराले टिप्पणी गर्नुभयो । 23 hours ago
Radio Xpress राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको एकता महाधिवेशन आजदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । २०६१ सालमा विभाजित भएका पूर्व पञ्चहरुका दुई पार्टीबीच एकता भएपछि मुलुकमा नयाँ शक्तिको उदय हुने दाबी उनीहरुले गरेका छन् । महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नाम, नयाँ नीति र नेतृत्व चुन्ने छ । तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनमा ७५ वटै जिल्लाका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । तर, एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा सूर्यबहादुर थापा रहने र चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाउन सहमति भने यसअघि नै भईसकेको छ । अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षमा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा रहने छन् भने अध्यक्ष मण्डलमा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, राजेश्वर देवकोटा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी रहने सहमति बनेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेपछि सो व्यवस्था अन्तर्गत काम गरेका पूर्व पञ्चहरुले दुई वटा छुट्टाछुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए । पछि तीन दुइ पार्टीबीच एकीकरण भएपनि २०६१ सालमा पुनः विभाजित भएका थिए । पूर्व पञ्चहरुकै ठूलो समूह भने कमल थापाको राप्रपा नेपालमा रहेका छन् । जुन यो एकता महाधिवेशनमा सहभागी छैन । 23 hours ago
Radio Xpress एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य कुमार दाहालले मदन भण्डारीका गाडीचालक अमर लामालाई आफूहरुले नमारेको बताउनुभएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले शुक्रबार दासढुंगामा आयोजित कार्यक्रममा अमर लामाको हत्याबारे एमाओवादीले जवाफ दिनुपर्ने बताएकै दिन दाहालले लामाको हत्या आफ्नो पार्टीले नगरेको दाबी गर्नुभएको हो । दासढुंगा काण्डका एकमात्र जीवित साक्षी लामालाई ०६० साल साउन ११ गते काठमाडौंको कीर्तिपुरमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । मदन भण्डारीको हत्यारा यही हो भन्दै दिउँसै बजारमा लखेटेर लामामाथि गोली चलाइएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताउँदै आएका छन् । लामाको हत्या माओवादीले गरेको अहिलेसम्म अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यसरी लामाको हत्या भएका बेला एमाओवादीको काठमाडौं उपत्यका हेर्ने जिम्मवारी दाहालको थियो । 23 hours ago
Radio Xpress नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुर्घटनाका प्रत्यक्ष साक्षी अमर लामालाई एकीकृत नेकपा माओवादीले हत्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेकपा एमाले चितवनले दासढुङगामा गरेको स्मृति सभामा नेता नेपालले अमर लामाको हत्या किन भयो भन्ने जवाफ अब एकीकृत नेकपा माओवादीले दिनुपर्ने बताउनुभयो । २० औ मदन आश्रित स्मृति दिवसमा दासढुंगामा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले घटनालाई लुकाउन लामाको हत्या गरिएको दावी गर्नुभयो । सरकार, आफनै पार्टी र जनस्तरमा घटना अनुसन्धानका लागि आयोग बनेपनि दोषी पत्ता लाग्न नसक्नु दुखःद भएको उहाँको भनाई छ । भण्डारीले प्रतिपादन जनताको बहुदलीय जनवादको विचारकै कारण नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकप्रिय भएको दाबी गर्दै नेता नेपालले नेपालको राष्ट्रियता कम्युनिष्ट पार्टीकै कारण सुरक्षित रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । 23 hours ago
Radio Xpress नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृति दिवस आज मनाईंदैछ । एमालेले काठमाडौंको बल्खुस्थित आफ्नो पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रम गरी दुबै नेताको बीसौं स्मृति दिवस मनाएको छ । श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मदन भण्डारी जस्तो नेता अहिले कोही नरहेको बताए । भण्डारीकै मार्ग दर्शनका आधारमा पार्टी अघि बढेको भन्दै खनालले भण्डारीले लिएको बाटो आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको जिकिर गरे । त्यस्तै खनालले अबको संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने दावी पनि गरे । आजभन्दा ठीक २० वर्ष अगाडि २०५० सालमा चितवनको दासढुंगामा भएको दुर्घटनामा जननेता भण्डारी र नेता आश्रितको निधन भएको थियो । २०५० साल जेठ ३ गते पोखरामा भएको एमालेको जिल्ला अधिवेशन सकेर चितवनमा अखिल नेपाल महिला संघको भेलामा आउँदै गर्दा भण्डारी र आश्रित चढेको पजेरो जीप दुर्घटनामा परेको थियो । जीपका चालक अमर लामा जीवित रहेका थिए भने नेताद्वयको निधन भएको थियो । रहस्यमय मानिएको यस दुर्घटनाबारे अहिलेसम्म पनि कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन । विभिन्न छानबिन कमिटी बनेपनि त्यसले कुनै तथ्य निकाल्न सकेको छैन । 23 hours ago
Radio Xpress सरकारले राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँग शुक्रबार साँझ वार्ता गरिरहेको छ । राजधानीको बबरमहलस्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा जारी वार्ता सदभावना पार्टीका मागबारे केन्द्रित छन् । निर्वाचन मिति घोषणा, नागरिकता वितरण, समावेशी विद्येयकलगायत १० बुँदे माग गर्दै सदभावनाले २४ जिल्लामा अनसन गरिरहेको छ । सरकारसँग वार्ताका लागि सदभावनाले लक्ष्मणकाल कर्णको संयोजकत्वमा नवलकिशोर साह र मनीषकुमार सुमन सदस्य रहेको तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 23 hours ago
Radio Xpress मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशका विभिन्न प्रावधान र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा साना १२ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । शुक्रबार भएको छलफलमा विशेष गरि समानुपातिक तर्फ संविधानसभा सदस्यको सिट प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने न्यनूतम मत प्रतिशत अर्थात थ्रेसहोल्ड, समानुपातिक सिट संख्या, दल दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने दश हजार मतदाताको हस्ताक्षर लगायतका प्रस्तावित विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानप्रति विभिन्न दलबाट आएका फरक फरक सुझाव र धारणालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रक्रियामा सबै दल र पक्षलाई सहभागी गराउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको समेत बताउनुभयो । छलफलमा उपस्थित विभिन्न दलका नेताले समानुपातिक तर्फको थ्रेसहोल्ड, समानुपातिक तर्फको सिट संख्या, निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रकृयालगायतका विषयमा देखा परेका जटिलता फुकाई सबै पक्षको भावनालाई सम्बोधन गर्न सरकारसंग आग्रह गरेका मन्त्रिपरिषदको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा नेकपा संयुक्त, नेकपा माले, नेपाल रिपब्लिक पार्टी, जनता दल युनाइटेड, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक दल, नवनेपाल निर्माण पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी लगायतका दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । 23 hours ago
Radio Xpress जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन टोलीले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुम र स्थानीय एक स्वास्थ्य चौकीमा छड्के अनुगमन गरेको छ। शुक्रबार बिहान गरेको छड्के अनुगमनमा ५ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको देखिएको छ। कार्यालयलाई नै जानकारी नदिइ उनीहरु घरमै बस्ने गरेको देखिएको छ। बिहान १० बजे गरेको छड्केमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका रामबहादुर खत्री, कृष्णबहादुर खडका र शसिराम ओली अनुपस्थित थिए। त्यस्तै मुसीकोट स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत लोकबहादुर ओली र जयबहादुर खड्का पनि छड्के निरीक्षणमा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता भुपेन्द्र पान्डेले जानकारी दिए। गर्मी मौसममासँगै बिरामी चाप बढेपछि कर्मचारीहरु उपस्थित नभएको जनगुनासो आएपछि छड्के अनुगमन गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए। उनको अनुसार अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको छ। छड्केमा परेका कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। गर्मी मौसमसँगै जिल्लामा बिरामीहरुको चाप बढेको छ। जिल्ला सदरमुकाम र गाउँका स्वस्थ्य संस्थामा ज्वरो, रुघाखोकी, पखलाको बिरामी बढेका छन्। 23 hours ago
Radio Xpress चुनावी माहोल सुरु भएसँगै नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताहरु सुदूरपश्चिम भ्रमण गर्ने क्रम तीब्र चलेको छ। एक महिनामै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैध र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता माधव नेपाल डडेल्धुरा पुगिसकेका छन्। चुनावको माहोल नजिकै जाँदा सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय स्तरका नेताहरुको दौडधुप धेरै नै हुन थालेको छ। दुई महिनाको अन्तराल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ट नेता शेरबहादुर देउवा तीन पटक डडेल्धुरा पुगिसकेका छन्। देउवा सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा छन्। उनले बाजुरामा २, अछाममा २, डोटीमा २ र डडेल्धुरामा २ वटा आमसभासमेत गरिसकेका छन्। संविधान सभा निर्वाचनको विजयपछि पहिलो पटक देउवा आफ्नो पुर्ख्याली गाउँ अशिग्राममा समेत पुगेका छन्। बिहीबारमात्रै डडेल्धुरा पुगेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि चुनाबी आम सभा गर्न गाउँ पुग्न थालेका छन्। थापाले एक सातामा सुदूरपश्चिमका तीन वटामा आम सभा गरेका छन्। थापाले पत्रकार सम्मेलनसमेत गाउँमा रहेको घटालस्थान मन्दिरमा गराए। शीर्ष नेताहरु अधिकांश कार्यक्रम गाउँ गाउँमा राख्ने। गरेका छन्। नेकपा एमाले वरिष्ट नेता माधव कुमार नेपालले पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आम सभाको आयोजना गरेको छन्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चार वटामात्रै सिट ल्याएका कारण पनि अहिलेदेखि नै निर्वाचनको तयारीको भइरहेको नेताहरुले बताएको छ। 23 hours ago
Radio Xpress नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मंसिरमा चुनाव हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । चुनावबाटै दलहरुको भविष्य सुरक्षित हुने भन्दै उनले मंसिरमा चुनाव हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका हुन् । आज गृहजिल्ला डडेल्धुरामा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता देउवाले सरकारले छिट्टै निर्वाचनको मिति तोक्ने समेत बताए । लोकमान प्रकरणमा अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले लोकमान नियुक्तिको नैतिक जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु जनताप्रतिको बेइमानी हुने टिप्पणी गरे । 23 hours ago
Radio Xpress बर्दियाको कण्ठपुरमा ट्याक्टरको ठक्करले एक जनाको ज्यान गएको छ । नेपालगञ्जबाट गुलरियातर्फ आउंदै गरेको अनटेष्ट ट्याक्टरले मैनापोखर ६ का ४५ बर्षीया बतासिया थारुलाई ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको हो । ट्याक्टर र चालकलाई प्रहरीले पक्रेको छ । त्यस्तै बर्दियाको मानपुरटपरामा पोखरीमा डुबेर १ बर्षीय सुजन थारुको ज्यान गएको छ । घरमा कोही नभएको बेला उनी पोखरीमा डुबेको प्रहरीले जनाएको छ । 23 hours ago
Radio Xpress Fotos de la biografíaFrom This Monday - Bolly Bounce -2Hour Show !! NjoY !!!!2days ago
Radio Xpress इङ्गलिस क्लव चेल्सीले युरोपिनय क्लव फुटबलको दोस्रो ठूलो प्रतियोगिता युरोपा लिगको उपाधि जितेको छ । गए राति एम्सटर्डममा भएको फाइनलमा नाटकिय जित दर्ता गराएको चेल्सीले पोर्चुगिज क्लव बेन्फिकालाई २÷१ ले हराएको हो । खेलको ६० औं मिनेटमा फर्नान्डो टरेसको गोलमा चेल्सीले अग्रता लिएको थियो भने ६८ औं मिनेटमा अस्कर कर्डोजोको गोलमा बेन्फिकाले बराबरी गरेको थियो । दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा ब्रेनिस्ल्याभ इभान���विचले गोल गरेपछि चेल्सी विजेता बनेको हो । युरोपिनय क्लव फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग समूह चरणमा तेस्रो स्थानमा समिटिएपछि चेल्सीले युरोपामा स्थान बनाएको हो । च्याम्पियन्स लिगमा समूह चरणमा तेस्रो स्थानमा अटाउने टोलीले युरोपामा स्थान पाउँछ भने पहिलो र दोस्रो हुने च्याम्पियन्स लिग नक–आउट चरणमा प्रवेश गर्छन । गत बर्ष भने चेल्सीले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि चुमेको थियो ।2days ago
Radio Xpress इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टोली राजस्थान रोयल्सको व्यवस्थापनले जनाए अनुसार उसका तीन खेलाडीलाई खेल मिलेमतोको आरोपमा सोधपुछका लागि बोलाईएको छ । एस.श्रीशान्त, अंकित चावला र अजित चण्डिलामाथि स्पोट फिक्सिङ्गको आरोप लागेको हो । यसबारे राजस्थान रोयल्स व्यवस्थापनले आपूm चकित भएको बताएको छ भने स्पोट फिक्सिङ्गसँग सम्वन्धित अन्य केही पनि जानकारी नभएको पनि उसले जनाएको छ । यस विषयमा राजस्थान रोयल्स व्यवस्थापन भारतीय क्रिकेट बोर्डसँग लगातार संपर्कमा रहेको छ ।2days ago
Radio Xpress भारतमा जारी इण्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट अन्तर्गत गए रातिको खेलमा जित हात पारेको मुम्बई इण्डियन्सले प्ले–अफमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । आफ्नै मैदानमा घरेलु टोली मुम्बईले राजस्थान रोयल्सलाई १४ रनले हराएको हो । पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले ८ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ६६ रन बनाएको थियो । मुम्बईको इनिङ्गमा आदित्य तारेले ५९ रन बनाए भने राजस्थानका जेम्स फल्कनर र शेन वाटसनले २÷२ विकेट लिए । जवाफमा १ सय ६७ रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले ७ विकेटको नोक्सानीमा मात्र १ सय ५२ रन बनाएपछि नतिजा मुम्बईको पक्षमा गएको हो । राजस्थनका ब्राड हजले ३९ रन बनाए भने मुम्बईका मिचेल जोनसन र धवल कुलकर्णीले २÷२ विकेट लिए । यो जितपछि १५ खेलबाट २२ अंक बटुलेको मुम्बई नेट रन रेटका आधारमा अंक तालिकको शिर्ष स्थानमा रहेको छ । दोस्रो स्थानको चेन्नई सुपर किङ्गसको समान खेलबाट समान २२ अंक छ । १५ खेलबाट २० अंक बटुलेको राजस्थान तेस्रो स्थानमा छ । आइपीएलमा आज नेपाली समय अनुसार साँझ सवा आठ बजे शुरु हुने खेलमा किङ्गस इलेभेन पञ्जावले दिल्ली डेयरडेभिल्सको सामना गर्नेछ2days ago
Radio Xpress बंगालको खाडीबाट उठेको महासेन चक्रवाती तूफानले बंगलादेश, बर्मा र भारतमा असर पार्ने भन्दै समुन्द्र तटमा बस्ने लाखौं बासिन्दालाई धमाधम अन्यत्र सारिएको छ । बंगलादेश र बर्माका समुन्द्र तटको गहिरो भागमा बसोबास गर्ने १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति आफ्ना घर छाडेर अन्यत्र सुरक्षित स्थलतर्फ गइरहेको खबर छ । यसअघि सरकारी अधिकारीहरुले जोखिम क्षेत्रमा बसिरहेकाहरुलाई सुरक्षित स्थलमा जान अपील गरेको थियो । बर्माको तटीय भागमा पनि सतर्कता अपनाइएको छ । बंगलादेशको चटगाउँ र कक्स बजारका बासिन्दा सुरक्षित स्थानतर्फ गइरहेका छन् । आँधी बंगालको खाडीबाट उत्तरपूर्वतर्फ बढिरहेको बताइएको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार तीन देशका ८२ लाखभन्दा बढी बासिन्दा आँधीको खतरामा छन् ।2days ago
Radio Xpress ईराकमा शिया समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा भएको बिस्फोटमा परी २३ जना मारिएका छन् । ईराकको राजधानी बग्दाद लगाएत किरकुक शहरको शिया बाहुल्यता क्षेत्रमा एक घण्टाका बीचमा ११ वटा छुट्टाछुट्टै बिस्फोट भएको हो । बिस्फोटमा थुप्रै घाइते भएका छन् । ईराकी प्रधानमन्त्री नुरी अल मलिकीले आफुहरुलाई अपहेलना गरेको आरोप सुन्नी समदायको छ । गत केही महिना यता सुन्नी समुदायले गरेको सरकार बिरोधी प्रदर्शनमा सात सय सुन्नी समदायको मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछी सुन्नी समुदायले शिया समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा बारम्बार आक्रमण गर्दै आएका छन् । यता सर्वसाधारणले भने सरकारको फितलो सुरक्षा ब्यवस्थाका कारण सयौंको मृत्यु हुनेगरेको भन्दै सरकारको ब्यापक आलोचना गरेको छ ।2days ago
Radio Xpress संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाली सेनाका सेनानी उज्ज्वल केसीलाई सिरियाको सरकारविरोधी एक समूहले पाँच घन्टा बन्धक बनाई मुक्त गरेको छ। केसीसँगै फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डका एक/एक जना सैनिक अधिकृतलाई सिरियाको सरकारविरोधी 'फ्रि सिरियन आर्मी' नामक एक समूहले बुधबार एकसाथ बन्धक बनाएको थियो। सेनानी केसीलाई बुधबार फ्रि सिरियन आर्मी समूहले बन्धक बनाई मुक्त गरेको नेपाली सेनाले पुष्टि गरेको छ। मुक्त भएका तीनै देशका सेना अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको सेनाले जनाएको छ। इजरेलको जेरुसेलममा मुख्यालय रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (युएनटिएसओ)मा पर्यवेक्षकका रुपमा रहेका सेनानी केसीलगायत तीन जनालाई बुधबार बिहान अपहरण गरी बन्धक बनाइएको थियो।2days ago
Radio Xpress बलिउडका चर्चित अभिनेता संजय दत्त अदालतको पैmसला पालना गर्दै साढे तीन बर्षको जेल सजायका लागि आज जेल पुगेका छन् । कारागार जानुअघि मुम्बईस्थित आतंकवाद विरोधी विशेष अदालत टाडा समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । टाडा अदालतले संजयलाई आतंकारीहरुबाट अवैध हतियार लिएको अभियोगमा ५ बर्षको जेल सजाय सुनाएकोमा सञ्जयले सर्वोच्च अदालत समक्ष आत्मसमर्पणका लागि थप समय माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतलले उनको याचिका अस्वीकार गरेपछि उनी पैmसला अनुसार नै जेल गएका हुन् । सञ्जयलाई आज मुम्बईस्थित अर्थरोड कारागारमा राखिने छ भने भोलि उनलाई पुणे कारागारमा चलान गरिने छ । सन् १९९३ को मुम्बई बम विष्फोटका दोषीहरुबाट एके फोर्टी सेभेन राइफल खरिद गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको थियो । उक्त अभियोगपछि पक्राउ परेका सञ्जयले केही बर्ष पहिले १८ महिना जेल सजाय काटेका थिए । अब उनले साढे ३ बर्ष जेलमा बिताउनु पर्नेछ ।2days ago
Radio Xpress बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य ४९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हो । बुधबार छापावाला सुन तोलाको ५१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतबार तोलाको ५१ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन सोमबार ३ सय रुपैयाँ घटेर ५१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार १ सय रुपैयाँ बढेर ५१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा २६ रुपैयाँ घटेको छ । बजारमा चाँदी तोलाको ८ सय ५४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार पनि चाँदीको मूल्य मूल्य १० रुपैयाँ घटेर ८ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।2days ago
Radio Xpress कार्यालय प्रमुखले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत महिला कर्मचारीले लगाएको आरोप झुटो र निराधार देखिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग, जिल्ला प्रशाशन कार्यालय, महिला सम्बद्ध विभिन्न संघसस्था लगायत अनुसन्धानमा खटेका अधिकारीहरुले एक साता लामो अध्ययनपछि उक्त आरोप निराधार भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठमाथि कार्यालयकी एक कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै करिब तीन दर्जन संघसंस्थामा उजुरी दिएकी थिइन् । जसमा राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रेस विज्ञप्ती नै निकालेर चरीत्र हत्या गर्ने उद्धेश्यले मात्र महिलाले दुर्व्यवहारको नाटक गरेको बताएको छ । सरुवा भएर पनि काज लिँदै घरपायकमा बसेकी अधिकृतस्तरकी ती महिला कर्मचारी र आर्थिक मामिलामा कमजोर कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठबीच शक्ति सन्तुलन र जिम्मेबारी बाँडफाँटका बारेमा झगडा हुने गरेको थियो । त्यसलाई 'इगो' बनाएर महिला कर्मचारीले पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रम र गोष्ठीमासमेत अवरोध पुर्याएकी थिइन् । उनको कुनै पनि विरोधका काममा अन्य कर्मचारीले सहयोग नगरे पनि उनले अन्तिम अस्त्र स्वरुप यौन हिंसाको बहाना बनाएकी थिइन् । आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटेको बताउँदै आसय करणीको उजुरी लिएको जिल्ला प्रशाशन कार्यालय रुपन्देही पनि उजुरी अगाडि बढाउने प्रक्रियाबाट पछि सरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले महिलाको उजुरी अनसार सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रहरी र सरकारी वकिललाई जिम्मा दिएको र अहिलेसम्म केही नपाएको बताए । महिलाको आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएकाले उनको उजुरी अदालतमा लैजाने र आरोपितलाई कारबाही प्रक्रिया थाल्ने काम नगरेको उनले जनाए ।2days ago
Radio Xpress चितवनमा १४ वर्षिया एक किशारी बलात्कृत भएकी छिन् । भरतपुर, आफन्तको घरमा हिंडेकी दोलखा घर बताउने १४ वर्षीया किशोरीलाई नारायणगढबाट लोथर चल्ने ना ३ ख २८५६ नम्बरको बसका चालक भण्डारा–८ का २७ बर्षिय नारायण खरेल र सहचालक भण्डारा–९ का २९ बर्षिय कुमार थापामगरले बलात्कार गरेका हुन् । किशोरीलाई उनको आफन्तकहाँ पु-याईदिने भन्दै गाडीमा राखेका उनीहरुले किशोरीमाथि जबर्जस्ती गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । पीडित किशोरीको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ भने दुवै अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ ।2days ago
Radio Xpress एमाओवादी नेता बर्षमान पुनको गाडीको ठक्करबाट एक युवकको ज्यान गएको छ । पुनका भाई प्रनिशले चलाएको बा ९ च ७९२२ नम्बरको गाडीको ठक्करबाट कीर्तिपुरका २२ बर्षीय शौरभ थापाको ज्यान गएको हो । दुर्घटना बुधबार राति ८ बजे भएको हो । ललितपुरको कुसुन्तीको एक घुम्तीमा गाडीले बिपरीत दिशाबाट आएको बा ४० प १२७२ नम्बरको मोटरसाइकलाई ठक्कर दिएको थियो । गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते थापालाई पाटन अस्पताल पुर्याइएको थियो । उपचारको क्रममा राति १० बजे उनको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुर प्रहरीका डीएसपी बिमलराज कट्टेलले उक्त गाडी नेता पुनको हो/होइन् यकिन गर्न नसकिएको बताए ।2days ago
Radio Xpress १३ विद्यार्थी सङ्गठनले आगामी २३ गते हुने स्ववियु निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरेका छन् । नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको विद्यार्थी सङ्गठनहरुको संयुक्त वैठकले स्ववियु निर्वाचनलाई सहमति–सहकार्यका साथ सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले आचारसंहिता निर्माण गरेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा विद्यार्थी नेताहरुले कुनै पनि क्याम्पसमा एक संगठनले अन्य संगठनलाई निषेधको राजनीति नगर्ने, चुनावमा भड्किलो खर्च गर्न नपाउने, पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने, चुनावमा रक्तपात मच्चाउन खोज्ने, चुनावलाई रणभूमिमा परिणत गरी भाँड्न खोज्ने तत्व पहिचान गरी सशक्त प्रतिकारमा उत्रने, अन्य विश्वविद्यालयमा २ गते संयुक्त रुपले ज्ञापन पत्र बुझाउने र २३ गते नै स्ववियु निर्वाचन निष्पक्ष गराउन दवाव दिने जस्ता नौ बुँदे आचारसंहिता सार्वजनिक गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेविसघका कार्यवाहक अध्यक्ष क्षितिज भण्डारीले अहिले स्ववियु निर्वाचन भाँड्ने तत्वहरु सक्रिय भएको भन्दै पैसा बाँडेर निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।2days ago
Radio Xpress उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चाले फौजदारी मुद्धा लागेका व्यक्तिलाई कुनै हालतमा संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउन नहुने धारणा राखेको छ । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बालुवाटारमा भेट्न पुगेका मोर्चाका नेताहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई उम्मेद्वार बनाए निर्वाचन नहुने भन्दै फौजदारी मुद्धा लागेका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने माओवादीको धारणाको पनि बिरोध गरेका छन् । सरकारले भने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणीत नभएकालाई उम्मेद्वार हुनबाट नरोक्ने नीती लिएको र प्रमाणीत भएमा र बलत्कार केशमा मुछिएकालाईमात्र उम्मेद्वारहुनबाट रोक्ने धारणा राखेपछि संयुक्त रुपमा बिरोध गरेको नेताहरुले जानकारी दिए । भेटमा मतदाता नामावली, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र पुननिर्धारण र थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । मोर्चासंगको भेट पछि रेग्मीलाई पशुपति शम्शेर राणा, सुर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायतले भेटेका थिए । भेटमा उनीहरुले थ्रेसहोल्ड हटाउन र फौजदारी अभियोगमा मुछिएकालाई उम्मेद्वार नबनाउन रेग्मीलाई सुझाव दिएका थिए । निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धमा भने रेग्मीले प्रवेश गर्न नचाहेको नेताहरु जानकारी दिएका छन् ।2days ago
Radio Xpress नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एकीकृत माओवादीको दादागिरी चल्न नदिने बताउनु भएको छ । रौतहटको सदरमुकाम गौरमा युवा संघ नेपालको २३ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा उहाँले चार दलको संयन्त्रभित्र एमाओवादीले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर दादागिरी गर्न खोजिरहेकाले एमालेले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो । मंसिरसम्म पनि चुनाव हुन नसके त्यसको जिम्मेवार वर्तमान सरकारको हुने नेपालको भनाइ थियो । चुनावका लागि आवश्यक कानुनी जटिलता मिलाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको भएको भन्दै उहाँले नाजायज माग तेर्स्याउनुको साटो नेकपा–माओवादी लगायतका दललाई जायज माग लिएर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो । चुनावको विकल्प नभएकोले देशलाई थप जटिल अवस्थामा पुग्न नदिन सबै पक्षले चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।2days ago
Radio Xpress सरकारले नेपाल प्रहरीमा ६ हजार दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले प्रहरीमा ६ हजार दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो । थपिने प्रहरी मध्ये एक हजार न्याय सेवाको सुरक्षामा खटाइने जनाइएको छ । यस्तै बर्मुडामा सम्पन्न आइसीसी डिभिजन थ्री क्रिकेटको उपाधि जित्दै डिभिजन टुमा प्रवेश गरेका नेपाली क्रिकेटरहरुलाई जनही साढे तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । तर केही सहसचिवहरुको बढुवा र सचिवहरुको सरुवामा भने मन्त्रीहरुबीच कुरा नमिलेको बुझिएको छ । नेपाली कांग्रेसले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नगद दुई लाख रुपैयाँसहित सम्मान गरेको छ । नेपाली क्रिकेट टोलीलाई केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यक्रम गरी काँग्रेसले सम्मान गरेको हो । सभापति सुशील कोइरालाले खेलाडिलाइ प्रशंसा पत्रसहित सम्मान गर्नुभयो । कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको प्रोत्साहन र सुविधा बिना नेपाललाई ठूलो सफलता दिलाएको भन्दै कोइरालाले क्रिकेट टोलीको प्रशंसा गर्नुभयो । सम्मान कार्यक्रममा कप्तान पारस खड्काले सम्मानले उर्जा थपेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न क्षेत्रबाट सम्मान पाउँदा आफूहरुको हौसला बढेको बताउनुभयो ।2days ago
Radio Xpress पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको नाइन एन ए वि ओ ट्वीनअटर विमान दुर्घटना भएको छ । आज बिहान साढे ८ बजे जोमसोम बिमानस्थलमा अवतरण भएलगत्तै तीव्र हावाका कारण विमान नियन्त्रणमा नआई दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । दुर्घटनाबाट विमानको अगाडीको भाग पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपनि मानवीय क्षति भने हुन पाएन । नदीले बगाउँदै गर्दा विमान चालकलाई सेनाले उद्दार गरेको जनाइएको छ । बिमानको अघिल्लो भागमा रहेका चालक दलका सदस्य र यात्रु बढी घाइते भएका छन् । चालक दलमा मुख्य चालक दिपेन्द्र प्रधान, सहचालक सुरेश केसी र परिचारिका सन्तमाया तामाङ्ग रहेका छन् । विमानमा चालक दलका सदस्यसहित २२ जना सवार थिए । दुर्घटनमा घाइते भएका मध्ये चालक दलका तीन सदस्य सहित ६ जना यात्रुको अवस्था गम्भीर छ । चालक दलका बाहेक गम्भीर घाइतेहरुमा पर्वतका गोबिन्द पहाडी र जापानी नागरिकहरु एस अकावा र खवेसा चियो रहेका छन् । उनीहरुलाई तारा एयरको विमानबाट पोखरा ल्याएर उपचारका लागि मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । बोल्न सक्ने अवस्थमा रहेका अन्य घाइतेहरुको जोमसोममै उपचार भईरहेको छ । विमानमा आठ जना जापानी नागरिक, ११ जना नेपाली नागरिक र तीन जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए । जसमा आठ महिनाका बालक समेत छन् । उद्दारमा जोमसोमस्थित सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी खटिएका थिए भने यात्रुलाई विमानस्थलसम्म ल्याउन स्थानीय जीपको प्रयोग गरिएको थियो । गम्भीर घाइतेमध्ये सहचालक सुरेश केसीलाई काठमाडौं ल्याईएको छ ।2days ago
Radio Xpress नेकपा–माओवादीले गरेको सुर्खेत बन्दका कारण त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । बुधबार एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन भएको जहरेमा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेपछि प्रहरी र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । त्यही विषयलाई लिएर नेकपा माओवादीले सुर्खेत बन्द आह्वान गरेको हो । माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तामाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै गरेको बन्दले नागरिकले सास्ती पाएका छन् ।2days ago
Radio Xpress सार्वजनिक धारामा पानी छोएको निहुमा दलित महिलामाथि छुवाछुत गर्ने एक दम्पत्तिलाई जिल्ला अदालत सल्यानले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गरेकामा दोषी ठहर गर्दै सेजवाल टाकुरा १ साहुटोलकी मेनुका राना र उनका श्रीमान् डिल्ली रानालाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो । अदालतले पीडित प्रेमा बस्नेत विकलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिर्न राना दम्पत्तिलाई आदेश दिएको छ । चैत ३ गते बिहान धारामा पानी भर्ने क्रममा पानी छोएको निहुमा आफुमाथि हातपात भएको भन्दै सेजवालटाकुरा १ साहुटोल सल्यानमा डेरा गरी बस्ने दार्माकोट २ सल्यानका प्रेमा बस्नेत बिकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानमा जाहेरी दिनुभएको थियो । आरोपी राना दम्पत्ति चैत ९ गते जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए । धारा छोएको भन्दै मेनुका रानाले धारामा अभद्र व्यवहार गरेको र उनका श्रीमान डिल्ली रानाले कोठामै आएर हातपात गरेको बिकले उजुरी गरेका थिए ।2days ago
Radio Xpress प्यूठानमा विहीवार दिउँसो भएको बस दुर्घटनामा २ जनाको ज्यान गएको छ । विजुवार जुम्री बसपार्कबाट लुङको बाहाने बजार जाँदै गरेको लु १ ख ५५७५ नं को यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा घटनास्थलमै एकको ज्यान गएको हो भने एकको जिल्ला अस्पत्तालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो । ज्यान गुमाउनेमा फोप्ली ४ का वर्ष १९ का दिलसन जिएम, फोप्ली ३ कि वर्ष ३८ कि खगी पुन रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ । घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी इन्सपेक्टर ऐनबहादुर मल्लका अनुसार घाइते ९ जनाको जिल्ला अस्पत्ताल विजुवारमा र ६ जनाको लाइफ केयर हस्पिटल बाग्दुलामा उपचार भइरहेको छ ।2days ago
Radio Xpress राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आपू र आफ्नो पार्टीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । डोटीमा आज पार्टी कार्यकर्तासंगको भेटमा थापाले राजा पनि आम नागरिक जस्तै भएको भन्दै आफूलाई पूर्व राजाको सर्मथन रहेको बताए । उनले असंवैधानिक नियुक्तिहरुले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत शंकास्पद बनाएको बताए । आजै डडेल्धुमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले नेपालीको पहिचान समाप्त पार्न जनआन्दोलनको उपलब्धिको नामा गलत कामहरु भईरहेको जिकीर गरे । आगामी मंसीरमा पनि चुनाव हुनेमा शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।2days ago
Radio Xpress नेपाली कांगे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संविधान सभाको चुनावमा नेकपा एमालेसंग गठबन्धन नहुने बताएका छन् । प्रेस यूनियन डोटी शाखाले आज दिपायलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले नेपाली कांग्रेस एक भएर अगाडि बढे कसैसंग गठबन्धन जरुरी नपर्ने जिकीर गरे । एमाओवादीले चुनाव जितेमा फेरि पनि संविधान बन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । देउवा सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा रहेका छन् ।2days ago
Radio Xpress नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले पुराना सहमतिको औचित्य समाप्त भएकोले राजनीतिक निकासका लागि नयाँ सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले बिहीबार महेन्द्रनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले १२ बुँदे लगायतका सहमतिको औचित्य समाप्त भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले ठुला चार दल असफल भएकाले अब नयाँ सहमतिमार्फत निकास खोज्न माग गर्नुभयो । उहाँले चारदलले गरेका सहमति खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । मतदाता नामावली संकलनका नाममा विदेशीलाई नागरिकता वितरण भइरहेको भन्दै वैद्यले यो नरोकिएसम्म कुनै सहमति नहुने दावी गर्नुभयो । वैद्यले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको राजनीति जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै सबै दल बसेर नयाँ सहमति गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । ठूला चार दल र अहिलेको सरकार विदेशीको इशारामा चलिरहेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिने वैद्यले बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै वैद्यले चुनावलाई नौटंकीको संज्ञा दिनुभयो ।2days ago
Radio Xpress नेकपा–माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले संविधान लेख्नकै लागि संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता नभएको बताउनुभएको छ । नेकपा–माओवादी बाँकेले नेपालगन्जमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा सचिव विप्लवले राजनीतिक सहमतीको आधारमा पनि जनताको संविधान बनाउन सकिने भन्दै निर्वाचन भन्दा पनि जनताको संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा प्रमुख भएको बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन गर्नु प्रतिगमनलाई संस्थागत गर्नु मात्र भएको उहाँको भनाइ थियो । निर्वाचनको औचित्य नभएको भन्दै उहाँले निर्वाचन हुनै नसक्ने बताउनुभयो । उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमतीको आधारमा जुनसुकै समय र स्थानमा संविधान बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेलिएको दावी गर्दै उहाँले प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेता त्यसको स्वदेशी नाइके भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी नहुने र निर्वाचनमा सहभागी हुने÷नहुने विषयमा आफ्नो पार्टीमा द्विविधा नरहेको सचिव विप्लवले बताउनुभयो ।2days ago
Radio Xpress इङ्गलिस फुटबल क्लव म्यानचेष्टर सिटीका प्रशिक्षक रोबर्टो मान्सिनीलाई क्लवले बर्खास्त गरेको छ । सिजनको शुरुवातमा म्यानचेष्टर सिटीले तय गरेको कुनै पनि लक्ष्य प्रशिक्षक मान्सिनीले प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै क्लवले यस्तो निर्णय गरेको जनाईएको छ । मान्सिनीको साढे तीन बर्षे कार्यकालमा सिटीले ४४ बर्षमा पहिलो पटक प्रिमियर लिग उपाधि र एक एफए कप जित्न सफल भएको थियो । उनको स्थानमा अब सहयाक ब्रायन किडले केही समयका लागि म्यानचेष्टर सिटीको कमान सम्हाल्ने छन् ।4days ago
Radio Xpress एउटा भारतीय गहना कम्पनीले विश्व विख्यात क्रिकेटर सचिन तेन्दूलकरको तस्बिर अंकित सुनको सिक्का बजारमा ल्याएको छ । तेन्दूलकरको तस्बिर अंकित २४ क्यारेटको १० ग्रामको एक लाख सिक्का कम्पनीले बजारमा ल्याएका हो । सिक्काको तेन्दूलकर आफैले मुम्बइमा अनावरण गरे । एउटा सिक्काको मूल्य ३४ हजार भारतीय रुपैयाँ राखिएको छ । गएको महिना ४० वर्ष लागेका तेन्दूलरले क्रिकेटमा अनेकौं कीर्तिमान कायम गरेका छन । एक सय शतक बनाएका तेन्दुलकरले एक दिवसीय क्रिकेटमा १८ हजार ४ सय २६ र टेस्टमा १५ हजार ८ सय ३७ रन बनाएका छन् । एक दिवसीय क्रिकेटमा २ सय रन बनाउने उनी पहिलो खेलाडि हुन । यो कीर्तिमान पछि वीरेन्द्र सेहवागले तोडेका थिए । उनले टेस्टमा ५१ र एकदिवसीयमा ४९ शतक बनाएका छन् । एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका तेन्दुलकरको नाममा विभिन्न ६५ वटा रेकर्ड छन् ।4days ago
Radio Xpress इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेट अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा मुम्बई इण्डियन्स विजयी भएको छ । मुम्बईले सन्राईजर्स हैदरावादमाथि ७ विकेटको जित दर्ता गराएको हो । पहिले ब्याटिङ्ग गरेको हैदरावादले ३ विकेटको नोक्सानीमा १ सय ७८ रन बनाएको थियो । हैदरावादका शिखर धवनले ५९ रन बनाए भने बलिङ्गतर्पm मुम्बईका लसिथ मलिङ्गाले २ विकेट लिए । जवाफमा १ सय ७९ रनको लक्ष्य मुम्बईले १९ ओभर ३ बलमा ३ विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । विजेता टोलीका काइरन पोलार्डले अविजित ६६ रन बनाए । यो जितपछि १४ खेलबाट २० अंक जोडेको मुम्बई नेट रन रेटको आधारमा चेन्नई सुपर किङ्गसलाई पछि पार्दै अंक तालिकाको शिर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ । चेन्नई समान १४ खेलबाट २० अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ । यसैगरी, तेस्रो स्थानको राजस्थान रोयल्सको समान १४ खेलबाट २० अंक बनेको छ । आईपीएलमा आज २ खेल हुँदैछन् । नेपाली समय अनुसार दिउँसो सवा चार बजे शुरु हुने खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंङ्गलोरले किङ्गस इलेभेन पञ्जावको सामना गर्नेछ । यसैगरी, साँझ सवा आठ बजे शुरु हुने खेलमा चेन्नई सुपर किङ्गसले दिल्ली डेयरडेभिल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।4days ago
Radio Xpress नेपालका पहिलो ओलम्पियन टोलीका सदस्य रामप्रसाद गुरुङलाई नेपाल बक्सिङ संघले आज सम्मान गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आयोजित कार्यक्रममा परिषदका सदस्यसचिव युवराज लामाले गुरुङलाई सम्मान गरेका हुन् । गुरुङले सन् १९६४ मा जापानमा सम्पन्न टोकियो ओलम्पिकमा बक्सिङतर्फ सहभागिता जनाएका थिए । टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका ४ जना बक्सर तथा दुई जना म्याराथुन धावकले सहभागिता जनाएका थिए । हङकङ लाहुरेको जागिरमा रहँदा गुरुङले ओलम्पिकमा बक्सिङतर्फ नेपालको सहभागिता जनाउने अवसर पाएका थिए ।4days ago
Radio Xpress बर्माको पश्चिमी पाउटाओ क्षेत्रमा रोहिन्ग्या मुश्लिम समूदायका मानिसहरुलाई लिएर गइरहेको डुंगा पल्टिएको छ । डुंगामा २ सय यात्रु सवार रहेको बताइएको छ । यो साताको अन्त्यमा “महासेन ”समुन्द्री आँधी आउने आशंकामा डुंगामा रहेकाहरुलाई खाली गराउने क्रम चलेकाले हताहतीको संख्या यकिन नभएको समाचारमा जनाइएको छ । गत वर्ष राखिने क्षेत्रमा हिंसा भड्किएपछि त्यस क्षेत्रबाट हजारौ रोहिन्ग्या मुश्लिम समूदायका मानिसहरु पलायन भएका छन् ।4days ago
Radio Xpress सिरियामा राष्ट्रपति बशार अल असादको शासन विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका विद्रोहीले आक्रमणका क्रममा मारिएका एक जना सरकारी सेनाको मुटु झिकेर खाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि हुन नसकेको उक्त भिडियोमा विद्रोही लडाकूले मृत्यु भएका सेनाको मुटु काटिरहेको देखाइएको बीबीसीले जनाएको छ । बेलायतका लागि काम गर्ने मानव अधिकारवादी संगठनले यस्तो कार्य गर्ने विद्रोही लडाकू होम्स शहरका परिचित लडाकू अबु सक्कर भएको दाबी गरेको छ । संगठनले सक्करको कार्य युद्ध अपराध भएको पनि जनाएको छ । मृत्यु भएका सेनाको अंगछेदन युद्ध अपराध भएको ठहर गर्दै मानवअधिकारवादी संगठनले यस्तो अपराध गर्नेलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनु पर्ने पनि जनाएको छ । सिरियाको मूख्य विपक्षी गठनबन्धनले यसबारे छानबिन गर्ने जनाएको छ । विद्रोही लडाकू सक्कर होम्स् क्षेत्रमा विद्रोहीका तर्फबाट स्वतन्त्र ओमार अल–फारुक ब्रिगेडको प्रमुख रहेको पनि संगठनले जनाएको छ ।4days ago
Radio Xpress लिबियामा कार बम बिस्फोट हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । लिबियाको बेनघाजी शहरमा रहेको अस्पताल नजिक भएको बिस्फोटमा थुप्रै घाइते भएका छन् । बिस्फोटले अस्पताल नजिक रहेको रेष्टुराँकाका साथै केही भवनहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । बिस्फोट कस्ले गरायो भन्ने केही खलाइएको छैन । लिबियामा पूर्व शासक गद्दाफीका समर्थकहरुले बिस्फोट गराएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । घटना लगत्तै लिबियामा सुरक्षाब्यबस्था कडा तुल्ःयाइएको छ । लिबियामा गता साता प्रहरी चौकीलाई लक्षित गरी गराइएको बम बिस्फोटमा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो ।4days ago